အကြောင်းအရာ Delivery - စာမျက်နှာ6- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အကြောင်းအရာ Delivery (စာမျက်နှာ 6)
ဒါဟာ Barco နှင့်အတူ သာ. ကောင်း၏င် - ထို E2 တင်ပြစနစ်လိုပဲ
သငျသညျအဆုံးစွန်တင်ဆက်မှုထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်သည့်အခါမျှထပ်မံ Barco နှင့်၎င်း၏ E2 တင်ပြစနစ်ထက်ကြည့်ရှုပါ။ အဆိုပါအရွယ်မှာနှင့် modular system ကိုဗိသုကာတိုးတက်သောသတင်းရပ်ကွက်အဘို့အ 12-frame ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အောင်းနေချိန်နှင့်အတူ 36-bits / အရောင် (1-bits / pixel) ကယ်တင်တတ်၏။ အဆိုပါ E2 ပြည့်စုံတင်ဆက်မှုထိန်းချုပ်မှုလိုအပ် features တွေနဲ့ functions နှင့်အတူ Loading ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ 6G SDI input ကိုကဒ်ကိုထောက်ပံ့သော 4x BNC connectors ရှိပါတယ် ...
အသံများသောအားဖြင့်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုပြီးဆုံးဖို့နောက်ဆုံးအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ့သို့သောအသံအယ်ဒီတာများ, အသံဒီဇိုင်နာများနှင့်ရောနှောကြောင့်အချိန်နှင့်ဘတ်ဂျက်မှကြွလာသောအခါရေတိုကောက်ရိုးရလေ့ရှိပါတယ်။ အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် finish ကိုသို့မဟုတ်ညှစ်ဖို့အရူး dash အစဉ်အဆက်လည်းမရှိဆိုပါက, သင်ကအသံအဖွဲ့ impact သွားရဲ့အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်း ...
ဒါဟာအရာရှိတဦးဖွင့် - ယဉ်ကျေးမှုနော်ဝေရဲ့န်ကြီးဌာန FM ရေဒီယိုမရှိတော့ 2017 အားဖြင့်နော်ဝေအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ သာငါး FM ရေဘူတာကမ်းလှမ်းတဲ့တိုင်းပြည်တွင်လက်ရှိ 22 ဘူတာကမ်းလှမ်းထားတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံလွှင့် (DAB), ဥရောပနှင့်အာရှနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်ပုံစံကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ "ဒါဟာသူကိုလူတိုငျးအတှကျအရေးပါသောနေ့ ...
PRO အသံEFFECTS® 2.0 #NABShow မှာ MASTER စာကြည့်တိုက်™ 2015 ဦးလွတ်မြောက်
2.0 ထပ်ပြောသည် 30,000 + အသံ, အွန်လိုင်း Access ကိုနှင့် New Subscription NAB 2015, Pro ကိုအသံအကျိုးသက်ရောက်မှု, လာမယ့်အဆင့်အထိအသံကစာကြည့်တိုက်ကုမ္ပဏီမှာ Features ၎င်း၏မဟာစာကြည့်တိုက် 2.0 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2.0 အဆင့်မြှင့် 30,000 အသစ်သောအသံသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, အွန်လိုင်းမှ access ကိုအင်္ဂါရပ်, နှစ်ပတ်လည်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်သစ်ကိုကြေးပေးသွင်းစျေးနှုန်းရွေးချယ်စရာကျော်တတ်၏။ အခုတော့ 2.1 terabytes နှင့် 175,000 သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများစုစုပေါင်းမာစတာစာကြည့်တိုက် 2.0 PSE ဖြစ်၏ ...
IsoAcoustics အဆိုပါ Aperta လူမီနီယမ် Acoustic အထီးကျန်ထားခြင်း 2015 #NABShow မှာမှာရပ်တည်ဖော်ပြပေး
စတိုင်ရပ်ဒီဇိုင်းနှင့် Acoustic အထီးကျန်ထားခြင်းများအတွက်တစ်ဦးက New နျ Standard Set နှင့်စတူဒီယိုမော်နီတာနှင့်အသံ Speakers IsoAcoustics ၏စွမ်းဆောင်ရည် Musikmesse (ခန်းမ 5.1 A68), Sculpt လူမီနီယံ acoustic အထီးကျန်မှုတွေ၏စတိုင်နှင့်ချောမွေ့ပြောင်လက်အသစ်များကိုလိုင်းမှာ၎င်း၏ပထမဆုံးဥရောပပွဲဦးထွက်အတွက် Aperta ပြသရန်ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် အလတ်စားပရော်ဖက်ရှင်နယ်စတူဒီယိုမော်နီတာနှင့်စပီကာအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာတစ်ခွင်။ Aperta, <a-pair တစုံ-tah> အီတလီ ...
2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး
အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ကြည့်ရှုပါ ...
2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု / အကြောင်းအရာ Delivery
အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု / အကြောင်းအရာ Delivery ကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ကြည့်ရှုပါ ...
2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ကြည့်ရှုပါ ...
တီထွင်ဖန်တီး / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး - 2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat
တီထွင်ဖန်တီးမှု / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ...
2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - တီထွင်ဖန်တီး / အကြောင်းအရာ Delivery
တီထွင်ဖန်တီးမှု / အကြောင်းအရာ Delivery ကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ...
2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - တီထွင်ဖန်တီး / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း
တီထွင်ဖန်တီးမှု / အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ...
2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - ဆန်းသစ်တီထွင် / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး
တီထွင်ဆန်းသစ်မှု / အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ...
Facilis မိတ်ဆက်နယူး Shared သိုလှောင်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုခြေရာကောက် 2015 #NABShow
FACILIS (ပြခန်း SL8811), ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် shared သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့်ရုပ်ရှင်, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် AV စနစ်စျေးကွက်များအတွက်ပြောင်းလဲနေသောလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတစ်ခုအားလုံးနှင့်အတူ High-end နှင့်ဘတ်ဂျက်နှစ်ဦးစလုံးသတိအဆောက်အဦအသစ်ဟာယပူဇော်သက္ကာကိုကြေညာ ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကိုအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုပရောဂျက်ရှာဖွေမှု, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Access ပေါင်းစပ် -new ခြေရာခံခြင်းထုတ်ကုန်။ အဆိုပါ TerraBlock 24D / HA Hybrid ကို Array ...
2015 #NABShow အသံလွှင့် Award ဆု Winner Beat - ဆန်းသစ်တီထွင် / အကြောင်းအရာ Delivery
တီထွင်ဆန်းသစ်မှု / အကြောင်းအရာ Delivery ကောင်းပြီရှေးရှေး, အမဲအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တရားသူကြီးလောဘ 2015 အသံလွှင့်အဘို့ရှိသမျှကိုတင်သွင်းထုတ်ကုန်ဆုပေးပွဲ Beat စိစစ်ပါပြီ။ အဆိုပါ "အသံလွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ" ဟုအဆိုပါ 2015 NAB Show မှာထုတ်လုပ်သူမှပေးအပ်ထားတယ်။ အဆိုပါတရားစီရငျစံ၏အချို့နည်းပညာမြေပြင်-ကြေကွဲခြင်းနှင့်တိုးခဲ့သည်ရှိမရှိလက်ရှိနည်းပညာ, ၎င်း၏တီထွင်အရည်အသွေးတွေပေါ်တွင်မူလတိုးတက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ...
6 ၏စာမျက်နှာ 14«ပထမဦးစွာ...«45678	»	10...နောက်ဆုံး»